 Nꞌụlọ Nna m ọtụtụ ụlọ obibi dị ya. Ọ bụrụ na o sighị otu a dịrị, agaara m agwa unu. Ma ana m aga idoziri unu ha. Mgbe m dozichara ha, aga m abịa ịkpọrọ unu, ka mụ na unu nọdụ.
O nweghị onye ọzọ pụrụ ịzọpụta anyị. Chineke ahọpụtakwaghị aha ọzọ nꞌụwa nile nye ụmụ mmadụ, nke a ga-esite na ya zọpụta anyị.”
 Mgbe ahụ elere m anya hụ elu ụwa ọhụrụ nke osimiri na-adịghị nꞌime ya, na mbara eluigwe ọhụrụ, nꞌihi na elu ụwa mbụ na mbara eluigwe mbụ ahụ, bụ ndị dị ugbu a, adịkwaghị. Mụ onwe m bụ Jọn hụkwara obodo nsọ ahụ bụ Jerusalem ọhụrụ ka o si nꞌeluigwe ebe Chineke nọ na-arịdata. Ọ bụ ihe dị ebube ma e lee ya anya. Ọ mara mma dị ka nwagbọghọ e jikwara nke ọma maka ịgba akwụkwọ ya. Anụkwara m oke olu si nꞌocheeze ahụ kwuo okwu sị, “Leenụ! Ebe obibi Chineke adịla ugbu a nꞌetiti ụmụ mmadụ. Ya na ha ga-ebikwa. Ha ga-abụkwa ndị ya. Ee, nꞌezie, Chineke nꞌonwe ya ga-anọkwa nꞌetiti ha bụrụkwa Chineke ha. Ọ ga-ehichapụ anya mmiri nile dị nꞌanya ha. Ọnwụ agaghị adịkwa ọzọ. Ọ bụladị iru uju na ịkwa akwa na ahụhụ agaghị adịkwa. Ihe ndị a nile agabigala ruo mgbe ebighị ebi.”
 Mgbe ahụ elere m anya hụ elu ụwa ọhụrụ nke osimiri na-adịghị nꞌime ya, na mbara eluigwe ọhụrụ, nꞌihi na elu ụwa mbụ na mbara eluigwe mbụ ahụ, bụ ndị dị ugbu a, adịkwaghị. Mụ onwe m bụ Jọn hụkwara obodo nsọ ahụ bụ Jerusalem ọhụrụ ka o si nꞌeluigwe ebe Chineke nọ na-arịdata. Ọ bụ ihe dị ebube ma e lee ya anya. Ọ mara mma dị ka nwagbọghọ e jikwara nke ọma maka ịgba akwụkwọ ya.
 Ndị nọ nꞌeluigwe nwekwara anụ ahụ nke ha, nke dịkwa iche site na nke anyị ndị bi nꞌụwa. Ịma mma ha na ebube nke ndị nọ nꞌeluigwe dịkwa iche na nke ndị bi nꞌụwa. Ịma mma na ebube nke anyanwụ dị iche, ọnwa nwekwara nke pụrụ iche. Otu a kwa, kpakpando nwekwara ịma mma pụrụ iche. Ma ụfọdụ kpakpando na-enwu ọcha karịa kpakpando ndị ọzọ. Otu a ka mbilite nꞌọnwụ ga-adị. Mgbe e liri anụ ahụ anyị, ihe nwụrụ anwụ na nke pụrụ ire ure ka ọ bụ, ma mgbe e mere ka o si nꞌọnwụ bilie, ọ gaghị anwụkwa ọzọ. Anụ ahụ nke anyị nwere ugbu a, bụ nke pụrụ ịrịa ọrịa na nke pụrụ ịnwụ anwụ. Ma mgbe e mere ka anyị dịrị ndụ ọzọ, a ga-eme ka o bilie nꞌotuto. Ee, ha bụ anụ ahụ na-adịghị ike ugbu a, ma mgbe anyị biliri ọzọ, a ga-eme ka ọ bụrụ anụ ahụ nwere ike. Ọ bụ nanị anụ ahụ mmadụ ka ha bụ mgbe e liri ya, ma mgbe e si nꞌọnwụ kpọlite ha, ha ga-abụ anụ ahụ nke mmụọ na-achị. Dị ka e nwere anụ ahụ nke mkpụrụ obi mmadụ na-achị, otu a kwa ka e nwere anụ ahụ nke mmụọ na-achị. Akwụkwọ nsọ kwuru sị, “E kere Adam nwoke mbụ ka ọ bụrụ mmadụ dị ndụ, ma Kraịst, Adam ikpeazụ, bụ mmụọ na-enye ndụ.” Na mbụ anyị na-enwe anụ ahụ mmadụ, ma nꞌikpeazụ Chineke ga-enye anyị anụ ahụ nke mmụọ na-achị. E si nꞌịta kee Adam nwoke mbụ, ma Kraịst, Adam nke ikpeazụ, si nꞌeluigwe bịa. Mmadụ nile nwere anụ ahụ dị ka Adam, nke e si nꞌịta kpụọ. Ma ndị nile bụ nke Kraịst ga-enwe ụdị anụ ahụ ahụ Kraịst nwere, anụ ahụ nke si nꞌeluigwe. Dị ka anyị nile si nwee anụ ahụ yiri nke Adam, nke si nꞌịta, otu ahụ kwa ka anyị ga-esi nwee anụ ahụ ga-adị ka nke Kraịst onye si nꞌigwe.
 Nꞌihi na nꞌebe m nọ, ịdị ndụ bụ ịnọ nꞌime Kraịst, ịnwụ ọnwụ bụkwa uru nye m. Ma ọ bụrụ na ịdị ndụ ga-enye m ohere iritere Kraịst ọtụtụ ndị mmadụ nꞌuru, amakwaghị m nke ka mma, ma ọ bụ ịdị ndụ ma ọ bụ ịnwụ anwụ. Nꞌihi na mgbe ụfọdụ ụzọ ihe abụọ na-agụsi m ike. Ọ na-agụ m ịdị ndụ na-aga nꞌihu, ma mgbe ụfọdụ ọ na-agụ m ikewapụ onwe m site nꞌanụ ahụ nke a, ka m lakwuru Kraịst, ebe mụ na ya ga-anọ mgbe nile. Ọ bụkwa ịlakwuru Kraịst kachasị ihe nile ọ bụla mma.
Ee, ọ bụladị Jemes na Jọn ụmụ Zebedi ndị ha na Pita so, ka azụ a ha gbutere juru anya. Mgbe ahụ Jisọs gwara ha sị, “Unu atụla egwu, nꞌihi na site taa gaa nꞌihu, ọrụ unu ga-abụ ịkpọbata mmadụ nꞌalaeze Chineke.”
2 KỌRINT ५:८
Jisọs gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, “Onye ọ bụla gere ntị nꞌihe unu gwara ya, ọ bụ mụ ka o gere ntị. Onye ọ bụla kwa jụrụ ịnabata unu, ọ bụ m ka ọ jụrụ ịnabata. Onye ọ bụla jụrụ ịnabata m jụrụ ịnabata Chineke onye zitere m.”
Ma anyị bụ ụmụ Chineke, ya mere, ọ bụ nanị ndị maara Chineke ga-ege anyị ntị. Ndị ụwa agaghị ege anyị ntị nꞌihi na ha amaghị Chineke. Nke a bụkwa ụzọ anyị pụrụ isi chọpụta onye si nꞌọnụ ndị nkwusa na-ekwu okwu. Nꞌihi na ọ bụrụ na Chineke esi nꞌọnụ ha kwuo okwu ụwa agaghị anabata ya.
 Mgbe ha risịrị nri, Jisọs kpọrọ Saịmọn Pita jụọ ya sị, “Saịmọn nwa Jọn, ị hụrụ m nꞌanya karịa ndị a nile?” Pita zara sị ya, “Ee Onyenwe m, ị maara na m hụrụ gị nꞌanya.” Jisọs sịrị ya, “Lekọtaa atụrụ m.” Jisọs jụrụ Pita ajụjụ nke ugboro abụọ sị ya “Saịmọn nwa Jọn, ị hụrụ m nꞌanya?” Pita zara sị ya, “Ee, Onyenwe m, ị maara na m hụrụ gị nꞌanya.” Jisọs sịrị ya, “Lekọtaa atụrụ m.” Jisọs jụrụ Pita ajụjụ nke ugboro atọ sị, “Saịmọn nwa Jọn, ị hụrụ m nꞌanya?” O wutere Pita na Jisọs jụrụ ya ajụjụ a nke ugboro atọ. Pita zara sị ya, “Onyenwe m ị maara ihe nile. Ị maara na m hụrụ gị nꞌanya.” Jisọs sịrị ya, “Lekọtaa atụrụ m. Nꞌezie asị m gị, na mgbe ị bụ okorọbịa i mere ihe dị gị mma nꞌanya. Ị gara ebe ị chọrọ ịga. Ma mgbe ị ghọrọ agadi ị ga-esite aka gị, mgbe ndị ọzọ ga-edu gị. Ha ga-edu gị gaa ebe ị na-achọghị ịga.” Jisọs kwuru nke a igosi ụdị ọnwụ Pita gaanwụ nꞌihi inye Chineke otuto. Mgbe ahụ, Jisọs sịrị Pita, “Soro m.”
 “Ọbịbịa m ga-adị ka ihe mere nꞌoge Noa. Nꞌoge ahụ ndị bi nꞌụwa ga na-ebi ndụ ha. Ha ga na-akpọkwa oke oriri na ọṅụṅụ. Ụfọdụ ga na-alụ di na nwụnye ha dị ka ọ dị nꞌoge Noa. Ma na mberede, oke mmiri ahụ bịakwasịrị ha, ma Noa banyere nꞌime ụgbọ mmiri ya. Ndị mmadụ ekwenyeghị na ọ dị ihe ga-eme tutuu oke mmiri ahụ abịa kpochapụ ha nile. Otu ahụ ka ọbịbịa m ga-adị. “Mmadụ abụọ ga na-arụkọ ọrụ nꞌubi ha, a ga-ewepụ otu hapụkwa onye nke ọzọ. Ụmụ nwanyị abụọ ga na-akwọ ọka ha nꞌụlọ igwe na-akwọ ọka, a ga-ewepụ otu, ma hapụ nke ọzọ.
Nꞌihi na Chineke chọrọ ka a zọpụta mmadụ nile, ka ha matakwa eziokwu ahụ.
Jisọs zara ya sị, “Nꞌezie, taa, ka ị ga-eso m nọdụ na Paradaịs.”